Raharizatovo Gilbert : « Aleo halamin’ny CFM ny firenena… » | NewsMada
Raharizatovo Gilbert : « Aleo halamin’ny CFM ny firenena… »
Nitondra tolo-kevitra. Efa napetraka ny CFM ka tokony homena hasina io. Aoka izay ny fanonganam-panjakana fa avela ho tapitra ny fe-potoam-piasan’ny filoha Rajaonarimampianina, araka ny nambaran’ny mpandalina sy mpamakafaka politika, Raharizatovo Gilbert, tao amin’ny fandaharana « Ambarao » ao amin’ny radio Alliance 92 FM, omaly. “Na hatao ny fifidianana na tsia, hiteraka olana izany ka tokony hotantanin’ny CFM heverina fa raiamandreny ny firenena, handaminany ny zava -drehetra… Tsy ilaina ireo Andrimpanjakana rehetra ireo satria manohana befahatany ny mpitondra… », hoy izy. Nanteriny fa tsy atao maharitra ny fitantanan’ny CFM mba tsy hisy hidongy toerana eo indray. Natao handamina ny fandriampahalemana sy tsy filaminana izy ireo . Hamerina amin’ny laoniny ny kolontsaintsika. Hanomana fifidianana miainga amin’ny lalàm-pifidianana sy lalàmpanorenana ahitana andininy 20, tsy azo kitihina intsony na iza na iza mpitondra hifandimby eo.
Halamina ny Foloalindahy, ny harem-pirenena…
Halamintsika ny Foloalindahy… Harindra ny fitrandrahana sy fitantanana ny harentsika ary ny tontolon’ny fananan-tany. Iarahana amin’ireo zanaka am-pielezana any an-dafy (diaspora) sy ny avara-pianarana na manampahaizana izany rehetra izany, araka ny nambarany. “Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny HVM, vitaina ny fe-potoam-piasanareo. Tsy hokitihina na haongana ka ndao handamina miaraka ny firenena isika. Hataontsika ny fifidianana… Avelao hiteny any ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Raharahantsika mianakavy manokana ity”, hoy izy.
Ankoatra izany, notsiahiviny avy eo fa tsy niova ny fomba amam-panao hatramin’ny Fahaleovantena no ho mankaty na teo aza ny fifandimbiasan’ny mpitondra ka zary tsy ahitana vahaolana. “Tsy niomana hitondra fanjakana ireo mpitondra nifandimby… Tsy nanao politika ka tsy mahalala ny zava-misy sy ny iainan’ny vahoaka eo amin’ny firenena. Miteniteny foana sy mandika vilana fotsiny izy rehetra”, hoy ihany izy. Notsindriny manokana fa tsy mba nangalatra na nanodinkodim-bolam-panjakana na tanim-panjakana sy nanao hosoka teny amin’ny ladoany Rabesahala Gisèle, Monja Jaona, Manandafy… “Mangorona ny ho azy sy ny fianakaviany ny amin’izao fotoana izao fa tsy mijery ny vahoaka sy ny firenena. Hahita raharaha ireo raha misy ny fanadihadiana iraisam-pirenena momba izany”, hoy ihany Raharizatovo Gilbert.